गठबन्धन फुट्ने आशमा रहेका एमाले नेताकार्यकर्तामा सन्नाटा, बालकोटबाट फर्किएको २ दिनमै देउवाले देखाइदिए ! - Sampurnab Khabar
गठबन्धन फुट्ने आशमा रहेका एमाले नेताकार्यकर्तामा सन्नाटा, बालकोटबाट फर्किएको २ दिनमै देउवाले देखाइदिए !
गठबन्धन फुट्ने आशमा रहेका नेकपा एमाले नेताहरुलाई झड्का लागेको छ । गठबन्धन फुटाउने कुरा त परको उल्टै ओली सरकारमाथि देउवा सरकारले एक्सन लिन थालेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालमा भएका भ्रष्टा,चारका फाइलहरू धमाधम खोल्ने निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको सूचनाअनुसार संसद अव’रुद्ध नखोले र अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमा सहयोग नगरे ‘नराम्रो हुने’ चेता’वनी ओलीलाई दिइसकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धि’करण र राष्ट्रिय अनु’सन्धान विभागमार्फत ओलीनिकट नेता र व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउन देउवाले निर्देशन दिएका छन् । आफैंले दुईरदुईपटक भंग गरेको संसद अवरु’द्ध गरेर ओलीले संसदीय प्रणालीलाई नै ध्व’स्त पार्न खोजेको आ’रोप लगाउँदै देउवाले यस्तो कदम चालेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीकालमा भ्र’ष्टाचारमा संलग्न भएका यति, ओम्नी, बतास समूह, भुसाल समूह र अन्य मेडिकल व्यवसायीलगायत दर्जन बढीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले ‘क्लोज सर्भिलियन्स’मा राखेको छ । त्यस्तै त्यतिबेला मन्त्री भएका करीब आधा दर्जन ओलीनिकट नेताहरूलाई पनि देउवाले निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।
भित्रभित्रै ओलीनिकट व्यवसायी र नेताहरूमाथि भ्रष्टा,चारको मुद्दा लगाउने तयारी गरेका देउवाले मंगलवार सरकार संचालनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेललाई ओलीनिवास बालकोट पठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा थप अव’रोध सिर्जना गरे ‘राम्रो नहुने’ चेता’वनीसमेत दिन लगाएका छन् ।
पौडेल बालकोट पुगेको खबर संचारमाध्यममा आएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सशंकित बनेका थिए । ओलीसँग सम्बन्ध सुधारका लागि पौडेल बालकोट गएका हुन् कि भन्ने आशंका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमा थियो । तर पौडेललाई देउवाले नै पठाएको जानकारी पाएपछि उनीहरूले त्रा’ण महसुस गरे ।
संसद खुलाउन र एमसीसी पास गराउने दवा’व दिन देउवाले यस्ता कदम चालिरहेको स्रोतले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयमा भएको अनियमिततादेखि बतास समूहसम्म भएका घ’ट’नाक्रम त्यसैको उपज भएको स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो समय ओली नजिकका नेता तथा व्यावसायीहरूमाथि बढाईएको नि’गरानी पनि ओलीलाइ कमजोर पारेर संसदको अव’रोध अन्त्यका लागि दबाब दिइएको बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
एकचरण केही नेता तथा व्यवासायीमाथि निगरानी बढाएर ओलीलाई आग्रह गर्न नेता पौडेललाई दूत बनाएर देउवाले पठाएका थिए । ओलीले संसदको अव’रोध अन्त्य नगर्ने संकेत पाएको खण्डमा देउवाले थप निगरानी बढाउने र ओली नजिकका नेताहरू जोडिएका का’ण्ड बाहिर ल्याउने उनको तयारी रहेको बताइएको छ ।
ओलीलाई देउवाले पठाएको सन्देशमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षिबीच सौहार्द सम्बन्ध हुनुपर्छ भनिएको छ । ओलीसँगको भेटमा पौडेलले यो सन्देश सुनाएको स्रोत बताउँछ । ‘यो सन्देशको अर्थ पनि सम्बन्ध बि’गार्नु हुँदैन भन्ने हो । संसद नखोले सम्बन्ध बि’ग्रन सक्छ भन्ने हो,’ स्रोतले भन्यो । अनलाइनमार्ग बाट
Prevपाखेरा बाट नियाँलोको टुसा ल्याएर देउवा र ओली खुवाउँने आनन्द बतासले,मन्त्री प्रेम आले विरुद्ध एक्सन लिने घोषणा
Nextएमाले फेरि बहुमत ल्याएर सरकारमा फर्किन्छ : विष्णु पौडेल